Messi oo talaabo u jira in Pele uu ku garaaco RIKOODH muhiim ah ee dhanka gool dhalinta – Gool FM
Messi oo talaabo u jira in Pele uu ku garaaco RIKOODH muhiim ah ee dhanka gool dhalinta
Dajiye April 1, 2019
(Spain) 01 Abriil 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa u baahan inuu kaliya dhaliyo 50 gool, si uu u noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee hal koox, taariikhda kubadda cagta.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa hoosta ka xariiqay guulaha Lionel Messi uu isku dayayo inuu gaaro, kadib markii uu booska labaad kasoo galay bishii November ee lasoo dhaafay xidigaha ugu goolasha badan ee hal koox, taariikhda kubadda cagta.
Lionel Messi ayaa soo fariistay booska labaad bishii November ee sanadkii hore, waxayna ku qaadatay inuu soo galo kaalinta labaad kadib markii uu goolashiisa kooxda Barcelona gaarsiiyay 566.
Messi ayaa kala baxay kaalinta labaad ee rikoorkan kadib markii uu dhaafay halyeeygii hore kooxda Bayern Munich ee Gerd Müller, kaasoo u soo dhaliyay 565 gool kooxda Bayern.
Bishii la soo dhaafay Messi ayaa gaaray goolkiisii 593-aad, taasoo ka dhigtay in uu kaliya 50 gool u jirsado halyeeyga reer Brazil ee Pele, oo 643 gool u dhaliyay kooxda reer Brazil ee Santos.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa wuxuu diirada saaray inuu isku dayo ka hadlida hadal uu sheegay Pele bilooyin kahor, kadib markii uu iska diiday in lala barbardhigo Messi waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Sidee leysla barbar dhigi karaa ciyaaryahan ku ciyaara labada lugood iyo madaxa, iyo ciyaaryahan ku ciyaara hal lug oo kaliya”,
Wargeyska ayaana isku dayaya inuu muujiyo in ciyaaryahanka halka lug kaliya ku ciyaaraya (Lionel Messi) uu haatan u jiro 50 gool si uu u dhaafo rikoorka halyeeyga reer Brazil ee Pele.
Sida caadiga ah, Messi wuxuu u baahan yahay in ka yar hal xilli ciyaareed si uu u dhaliyo 50 gool, waxaana laga yaabaa in marka la gaaro maanta oo kale xili ciyaareedka soo socda in Messi uu noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan ee hal koox, taariikhda kubadda cagta.
Sarri oo ka jawaab celiyay codsi ka yimid taageerayaasha careysan ee kooxda Chelsea
"War Waxba igama galin Gool dhalinta aad sheegeysaan.".- Maxamed Saalax oo furka tuurtay